योगीले भन्नु भयो–‘जतन गर्नु’ « Loktantrapost
योगीले भन्नु भयो–‘जतन गर्नु’
२९ जेष्ठ २०७३, शनिबार १४:३४
०५० सालको बैशाख १ गते विहानै मेरा घरमा योगी नरहरिनाथ आइपुग्नु भयो । झापा आउँदा उहाँ जहिल्यै पनि हालको शनिअर्जुन–९ स्थित मेरा घरमा बास बस्न आउने गर्नु हुन्थ्यो । यसलाई उहाँको मप्रतिको असीम कृपा नै ठान्दछु । म योगीजी जस्तो महापुरुषसँग सङ्गत गर्न पाएर जीवन नै धन्य भएको ठान्दछु । उहाँले जता भन्नु हुन्थ्यो उतै साथमै गइदिन्थे । जे अराउनु हुन्थ्यो, त्यही गरिदिन्थे ।
योगीजीको आफ्नै जीवन जिउने शैली थियो । नववर्षको दिन मेरा घरमा उहाँको आगमनले खुशीको बहार भित्रिएको थियो । उहाँले स्नानपछि सामान्य भोजन गर्नुभयो र मलाई बोलाएर अराउनु भयो–‘तपाइँका छरछिमेकी, साथी भाइ, वरपरका सबैलाई बोलाउनुहोस्, आज नववर्षको शुभकामना आदानप्रदान गर्नु पर्छ ।’
म उत्साहित भएर देवीबहादुर श्रेष्ठ, अम्बर कार्की, खडानन्द पराजुली, लवकुश गिरी, पदमलाल श्रेष्ठ, नन्दीकेशर भट्टराई, रामवावु भट्टराई लगायतकहाँ योगीजीको सन्देश पुर्याए । खबर पाएर महिला, पुरुष, वृद्ध वृद्धा, युवा आदि सबैको उपस्थिति भयो मेरा आँगनमा ।
जसरी ऋषिमुनिहरू, जसरी देवताहरू भेलामा गम्भीर मुद्रामा आसनग्रहण गर्छन्, त्यसैगरी उहाँ बस्नुभयो । हामी समस्त भद्रजन उहाँका अमृतमय ज्ञानवाणीको रसपान गर्न थाल्यौँ । उहाँले सर्वप्रथम ‘नववर्षको शुभकामना छ सबैलाई !’ भन्नु भयो । त्यसपछि पुर्खाको अमरगाथा सुनाउनु भयो । श्रोताले आनन्द मानी मानी श्रवण गरे । एकछिन पछि उहाँले त्यो सन्देशको खेस्रा मलाई दिदै भन्नुभयो–‘यो तपाईले जतन गरी राख्नु ।’
त्यस खेस्रामा यस्तो लेखिएको थियो–
जय गोरखकाली । समग्र विश्वका नौ कोटी गोर्खाली वीर वीराङ्गाना अठार कोटी पाखुरामा गोर्खा जातिको वीरप्रस माता दुर्गा भगवतीको प्रमुख शिरुपाते खुकुरी झलक्क बिजुली झैँ चम्काउँदै सङ्ग्राममा अघि बढे भने यमराजले पनि यमदूतहरूको पृतना फर्काएर पछि फर्कनु पर्छ ।
यो कुरो विश्वले जानेको छ । जाइ नलाग्नु आइलाग्नेलाई बाँकी नराख्नु भन्ने गोर्खाली उखान पनि सबैले जानेकै छन् । जाइ कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु ; भन्ने गोरक्षाधीश पृथ्वीनारायणको अर्ति पनि चार जात छत्तीस वर्णले कर्णगोचर गरेकै छन् ।
कञ्चनजङ्गाबाट सिंहवाहिनी दुर्गाको गर्जना सुनिदै छ । पाङ्ग पर्वतबाट गुरुङ राजा अरमुडीको गर्जना सुनिदैछ । वेत्रावती साँघुमा दामोदर पाँडेका भुजामा भुजेली चम्कँदै छ । जैथक किल्लामा भक्ति थापाका दुबै हातमा रिपु रक्तरञ्जित दुबै तरवार चम्कँदैछन् । लखनौँका लडाइँमा बहादुर कर्नेलका दुबै हातमा रिपु रक्तरञ्जित दुबै खुकुरी चम्कँदै छन् । कञ्चनजङ्घाको फेँदी दार्जीलिङमा गोर्खा वीर वीराङ्गाना नरनारीहरूका हातमा नाङ्गा खुकुरी बिजुली झैँ झल्ल झल्कँदैछन् । यस्ता कति गर्जे, कति गर्जदैँछन् । कति गर्जने छन् । कति चम्के, कति चम्कँदै छन् । कति चम्कने छन् ।
सृष्टिका आदिकालदेखि आजसम्म कैलासकुटको मुकुट ढल्केको छैन । मान्म खाँडा चक्रको आदिराज मनुको सिंहासन चौके ढुङ्गे ढल्केको छैन । विश्व विजयी वीर गोरखा जातिका मूल राजधानी गोर्खाका राजा द्रव्यराम पृथ्वीको राजसभा गर्ने धारे ढुङ्गो ढल्केको छैन । विश्वोत्तुङ हिमश्रृङ्ग नौबन्ध सगरमाथा झुकेको छैन । झुक्ने पनि छैन । विश्वका नौ कोटी गोर्खाका नौ कोटी शिर पनि झुकेका छैनन् । झुक्ने पनि छैनन् ।
यो हस्तलिखित शुभकामनालाई २२ वर्ष आजपर्यन्त सुरक्षित राख्ने काम गरेँ । कागज नै हो, कति ठाउँ टाल्ने काम पनि गर्नु पर्यो । यो शुभकामना पत्र मेरा जीवनपछि कसले प्रकाशित गर्छ आदि विचारमा थिएँ । काठमाडौँमा प्रेम कैदी, दामोदर न्यौपाने आदिसँगको भेट एवम् विशेष उपस्थितिमा फेसबुकमा राख्ने परामर्श पाएँ ।
विश्वको एकमात्र सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्म सापेक्ष गोरक्षक हिन्दु राष्ट्र नेपालको अमोध कल्पनाका महान त्यागी देशभक्त, राष्ट्रबादी श्रद्धेय योगी नरहरिनाथद्वारा प्रदान भएको यो शुभकामना विश्व ब्रह्माण्डभरिका जनसमूहलाई अर्पित छ ।
हे, महायोगी महामनिषी महामानव महात्मा !
हे, त्यागी तपस्वी सद्गुरु सज्जन आत्मा !!
हे, कीर्तिपुरुष युगपुरुष योगपुरुष परमात्मा !
हे, गोरक्षरुप प्रकाशपुञ्ज शाण्डिल्य गोविन्द !!
हे, गोविन्दको शत् शत् नमन गुरु चरणमा !!!